I Imibhobho esemzimbeni zenzelwe fafaza emoyeni ixubene fuel yanikezwa yangaphakathi omlilo injini amasilinda ngaphansi kwengcindezi okusezingeni eliphezulu. Uma injector kuyinto serviceable futhi ihlanzekile, ingxube wafutha ingena uMbhalo simise oyindilinga. Uma ivimbekile umusi futhi ke fafaza ifomu nesibalo salabamnyama ingxube uphethiloli nge air ushintsho, okuyinto kwandisa petrol kanye zibulale injini ukusebenza. Ukuze ugweme lokhu, umnikazi imoto akufanele sikhohlwe isimo sabo, nokugeza njalo we Imibhobho esemzimbeni kufanele kube into saziso.
I injectors fuel asebenza endaweni nolaka. Kule ndaba, ikhwalithi fuel nobumsulwa kukhona ezibaluleke kakhulu, kusukela ezingcolisa organic incane kakhulu, evutha, injector Imibhobho esemzimbeni atholakala imali kwi ungqimba umule. Imibhobho esemzimbeni uhlambulule Kudingeka kuhlanzwe le-carbon. It kungenziwa ngezindlela ezahlukene.
Muva nje, Imibhobho esemzimbeni egeza izandla kwakungelona kangaka kube into eza kuqala lapho ithuba kuphela wonke, ngaphandle kokukhetha, ngemgwaco abashayeli. Namuhla, thina ithuthukiswe ubuchwepheshe ezikhethekile ezenza ukuba bafeze zokuvimbela owandulelayo ungcolisa phezu Imibhobho esemzimbeni futhi asebenzise imishini ethize, ngokuvamile ebizwa ngokuthi amadokodo, oveza ezenzakalelayo uhlambulule Imibhobho esemzimbeni.
abanikazi Vehicle wageza zabo izithasiselo (dopants) ngoba uphethiloli. Namuhla emakethe linikeza ezihlukahlukene enkulu imikhiqizo imishini yesondlo, kuhlanganise reagents, ngosizo lapho Imibhobho esemzimbeni zangaphambi hashaza. Badinga ukungezwa uhlelo fuel zonke amakhilomitha izinkulungwane ezimbili noma ezintathu. Ngenxa yalokho, lokhu kuwukhulula umule ezincane kwakheka kwi umlomo wombhobho ngesikhatsi operation imoto.
Le mithi ezinhle nezisebenzayo, bona isikhathi ekuphileni we Imibhobho esemzimbeni ukusiza ukugcina lonke uhlelo fuel ihlanzekile, kodwa kuphela njengoba prophylactic, ekuvimbeleni ukwakheka ungqimba obukhulu umule. Kunoma ikuphi akunakwenzeka ukwengeza izithasiselo, uma Imibhobho esemzimbeni kakade osekukade ukungcola. Kwaluqeda ebusweni izingcezu umlomo wombhobho ukungena umule lemifanekiso, isikolo umugqa, kuyoba ngaphansi kwengcindezi okusezingeni eliphezulu fuel futha e umgodi we Imibhobho esemzimbeni futhi ekugcineni bayoba konakalisa.
Ngakho-ke, lapho injectors umlomo wombhobho usunayo i ungqimba idiphozi, kungenzeka ngaphandle kokukhipha injector kusuka injini, kugeze kumakhemikhali awuketshezi yabo kwi ukuma. Kulokhu injini imoto waqala, futhi ngalesi sikhathi it is jabulile kulo lonke uhlelo, futhi isimo lihlolwe Imibhobho esemzimbeni, ukusebenza kahle kanye Isifutho yabo iphethini ingxube nophethiloli. Ukuchusha uhlambulule okunjalo Imibhobho esemzimbeni kwimodi okuzenzakalelayo akuthathi isikhathi esiningi. Kuyinto ngempumelelo esigabeni maphakathi ukungcola, ngakho-ke Kunconywa ukuba asebenzise njalo.
Uma umlomo wombhobho isivele ushiswe, ukuba babe khona ngempumelelo kuphela Supersonic ukujula kwamanzi egeza Imibhobho esemzimbeni, ngoba ezinye izindlela ezimbili kakade azisebenzi, abazi ukukulungisa. Kulokhu, umlomo wombhobho adiliza ibekwe endaweni okugeza solution ukuphathwa, okuyinto badabula emisebeni ultrasonic. umule angqongqa iqala ukuba izinhlayiya zeqhwa off wawela phansi kubhavu.
Amafutha "Manol": ukubuyekezwa. uwoyela Engine: Ukucaciswa, amanani
BMW 525i: ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nokubuyekeza of the abanikazi
Indlela ukususa tint we ingilazi, futhi kungani le nkinga sona sinikwe othe xaxa nokuningi abanikazi imoto?
Ezebiwe Most izimoto eRussia
Indlela ukulungiselela ukuhlolwa ezifundweni nomphakathi: awusizo namasu
Aluminium (sulphate noma sulphate) - incazelo emfushane ukusetshenziswa
Lining - abami emphemeni.
Sense isigqi, ikhono emculweni. Bonisa ukuthuthukisa umuzwa isigqi
Makalale Ochakov: ukuzilibazisa nemkhakha wangasese
Utshwala lokushisa: ekuhlaziyeni abakhiqizi engcono onobuhle
Indlela sculpt amakhekhe
Ukwelashwa ukukhwehlela emanzi abadala: Izici, amasu nezindlela ngempumelelo